Ny Black Swan sy dibera voanjo ary jelly Sandwich | Martech Zone
Ny Sandwich Black Swan sy ny voanjo ary ny jelly Sandwich
Alahady, Desambra 2, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nampiasa serivisy aho mba hanaovana fanadihadiana ny bilaogiko hahitako ny haavon'ny famakiana azy. Somary gaga aho fa eo an-tsekoly amin'ny lisea Junior ity tranonkala ity. Amin'ny maha mpamaky sy bilaogera mazoto ahy, tokony hanao tsara kokoa noho ny amin'ny lisea Junior aho, sa tsy izany? Rehefa eritreretina fanampiny izany dia tsy azoko antoka fa manan-javatra mahamenatra aho.
Fomba fanamboarana dibera voanjo sy jelly sandwich
Ny iray amin'ireo mpampianatra anglisy tiako indrindra dia nanokatra ny fianaranay indray mandeha tamin'ny fanazaran-tena, Ahoana ny fomba fanamboarana dibera voanjo sy jelly. Naharitra 30 minitra izahay nanoratra ny torolàlana, ary ny ampitso, dia gaga anay izy nitondra tavoahangy voanjo, jelly, mofo ary antsy dibera.
Avy eo dia nanomboka nanaraka ny torolàlana izy ary nanao ny sandwich. Ny vokatra farany dia loza miaraka amin'ny torolàlana fohy ary koa amin'ny famaritana be indrindra. Angamba ny mahatsikaiky indrindra dia ireo izay tsy nanonona ny hampiasa antsy mihitsy. Io no kilasy anglisy voalohany noraisiko fa nivoaka tamin'ny aretim-bavony avy nihomehy mafy aho. Nifikitra tamiko ihany anefa ny teboka nianarana.
Ny fehezan-teny fohy, ny famaritana fohy, ny voambolana tsotra ary ny lahatsoratra fohy dia mety hitarika anao any amin'ny ambaratonga famakiana amin'ny lisea ambaratonga kely, fa manokatra ny bilaoginao (na ny boky) ho an'ny mpihaino maro kokoa izay hahatakatra ny vaovao. Heveriko fa raha nanana tanjona hamaky ambaratonga bilaogy aho dia mety ho lisea! Raha azoko atao ny manazava ny teknolojia iarahako miasa amin'ny olona iray 15 taona dia azo antoka fa misy olona 40 izay handevona azy!
The Black Swan avy amin'i Nassim Nicholas Taleb
Io fihetsika io no anokafako boky toy izao Ny Black Swan ary tsy afaka mamaky ireo pejy 50 voalohany ao anatin'ny iray volana famakiana. Iray Fanakianana Amazon mametraka azy io:
[Ankoatra ny Toko 15 ka hatramin'ny 17]… Mandiso fanantenana ny ambin'ny boky. Pejy an-jatony no azo fehezina amin'ny filazàna fotsiny fa tsy afaka maminavina trangan-javatra tsy fahita firy isika.
Whew! Soa ihany fa tsy izaho irery! Nanaintaina ity boky ity. Tsy mahagaga raha maninona no mankasitraka ny bilaogy ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy manandrana manoratra bestseller ao amin'ny New York Times aho, ary tsy manandrana manentana ny mpanao gazety any Ivy. Manandrana manazava an'ity zavatra ity amin'ny fomba tsotra fotsiny aho mba hahafahako mizara azy ary afaka mahatakatra izany ianao.
Teny azoko ampiasaina hilazana ny The Black Swan: bombastic, chatty, diffuse, discursive, flatulent, gabby, garrulous, inflated, lava, longed, longed, longed, palaverous, pleonastic, prolix, rambling, redundant, rhetorical, mankarary, turgid, verosa, voluble, be rivotra. (Thanks Thesaurus.com)
Raha nanoratra i Taleb Ahoana ny fomba fanamboarana dibera voanjo sy jelly, mety mbola miasa eo ny profesora ahy - ary azo inoana fa hitovy amin'ny sandwich ihany izany.
Izany dia nilaza fa hiverina aho ary handray ny torohevitr'ilay mpitsikera ary hamaky ny Toko 15 ka hatramin'ny 17. Ary angamba dibera voanjo sy sandwich vita amin'ny jelly no milamina! Mikasika ny famakafakana ny haavon'ny famakiana dia aza mandinika be loatra… fehintsoratra iray natsofoka tamin'ny tesaurus no mety hahalavo anao. 😉
Tags: boky marketingnassim talebny swan mainty
Mangotraka ny ra an'ny mpiblaogy rehefa miparitaka ny tsy fahampian'ny SEO
Fahatakarana ny antony sy ny antonony…
Dec 3, 2007 amin'ny 8: 24 AM
Raha ny marina, araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana momba ny fanoratana, ny fanaovana "tsara kokoa" dia manoratra amin'ny ambaratonga ambany kokoa. Ny salan'isa famakian-teny eto amin'ity firenena ity dia kilasy faha-6, ary ny gazety rehetra dia voasoratra amin'io ambaratonga io. Ireo mpanoratra Marketing Communication tsara dia hanoratra amin'ity sehatra ity ihany koa, fa tsy amin'ny ambaratonga ambony. Manamora kokoa ny famakiana sy ny fahazoana ny kopian'izy ireo izany, ka manapaka ny fikorontanana rehetra eo amin'ny fiainantsika, ary noho izany dia azo inoana kokoa ny handresy lahatra. (Tsy miteny koa izy ireo hoe “ary noho izany.”)
Efa namaky ny Black Swan koa aho, ary MAHERY. Enga anie ianao ka namoaka ity bilaogy ity tokony ho dimy toko lasa izay ary namonjy ahy tamin'ity fampijaliana ity.
Dec 3, 2007 amin'ny 9: 50 AM
Hitahy anao, Doug, sy ny mpandinika ny hevitrao momba ny The Black Swan. Mitovy amin'izany ny fiantraikany amiko amin'ny Coupla Seconals–10 minitra miaraka amin'ny boky dia lasa aho. Omaly alina aho dia natory tamin'ny 8:45!
Ny zanakao lahy Nassim no antsoiko hoe SAKIA–smart ass know-it-all. Mifanaraka amin'ny famaritan'ny asa ataoko ihany koa izy ny amin'ny hoe avo-brow–izay manana fianarana mihoatra ny faharanitan-tsainy. Misy olona mila mamely an'ity punk mahafatifaty ity - mamela toro-hevitra $100 ho an'ny cabbies.
Amin'ny maha-majistra ara-toekarena efa sitrana, dia nanana anarana ho an'ny Black Swans izahay. Nantsoinay hoe "hetsika exogenous" izy ireo, ary nopotehin'izy ireo foana ny teoria vinavinay. Ny econ majors dia manana fahatakarana bebe kokoa momba ireo zavatra ireo-tsy azo vinaniana ny fisehoan-javatra tsy ampoizina.
Dec 3, 2007 amin'ny 9: 51 AM
Araka ny voalazan'i Derek momba ny Gazety sns dia namaky tany amin'ny toerana iray aho (teny las malaza marina:) fa ny TIME dia mitifitra ho an'ny kilasy faha-6-7 rehefa manoratra ny tantarany mba hanamora ny famakiana ny olona rehetra.
Ny sasany amin'ireo lahatsoratra tsara indrindra novakiako tamin'ny bilaogy samihafa dia fehezanteny fohy misy dikany, heveriko fa i Seth Godin no tompon'ity.
Dec 4, 2007 amin'ny 4: 59 AM
Nahazo “Junior High” koa aho.
Ahoana no ahafantarako raha miasa ny tranokala? Misy bilaogy malaza amin'ny famakiana sarotra ve?
Dec 12, 2007 amin'ny 1: 46 AM
Heveriko fa Ny Black Swan mety mety ho an'ny mpivarotra noho ny fahatakarany ny tena loza atrehantsika amin'ny tsena ankehitriny. Amin'ity boky ity dia hianatra bebe kokoa momba ny fahefana sy ny fifehezana ianao noho ny any amin'ny toerana hafa. Ny hery sy ny fanaraha-maso dia mahazo kapoka ratsy - na izany aza, ny mpivarotra dia mandresy lahatra ny olona isan'andro ary ireo dia toetra roa maharesy lahatra? Angamba.
Tsy mora ny mamaky nefa manoro izany ho an'ny mpanapa-kevitra amin'ny karazana rehetra.